नर्भिकमा कोरोना उपचार : एक दिनकै ६८ हजार (बिलसहित)
भाद्र १७, २०७७ २१:४४ मा प्रकाशित
कोरानाको बिरामी भनेपछि हरेक इन्भेष्टिगेसनको शुल्क अरुलाई भन्द ५० प्रतिशत बढी लिइएको उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौं । वीरगञ्जका ४५ वर्षीय एक जना पुरुष दमको बिरामी हुनुहुन्थ्यो । केही दिनदेखि सामान्य ज्वरो आएको थियो । सास फेर्न गाह्रो भएपछि परिवारले गण्डकस्थित बौद्ध अस्पताल लगे । त्यहाँ कोरोनासँग मिल्दाजुल्दो लक्षण देखिएको भन्दै पीसीआर रिपोर्ट नभएसम्म त्यहाँ भर्ना नलिने भन्यो । सो अस्पतालले भर्ना लिन पीसीआर रिपोर्ट चाहिन्छ भनेपछि परीक्षण गरियो र रिपोर्ट नेगेटिभ आयो।
रिपोर्ट नेगेटिभ रहेपछि बौद्ध अस्पतालले भर्ना लियो । तर भर्ना भइसक्दासम्म बिरामीको अवस्था गम्भीर भइसकेको थियो । श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि भोलिपल्टै एम्बुलेन्समा अक्सिजन दिँदै थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल ल्याइयो । नर्भिकले पुनःपीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ भनेपछि स्वाब परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आयो।
मौकामा चौका हान्न दाउ हेरेर बसेका निजी अस्पतालहरुले जीवन मरणको दोसाँधमा परेका बिरामीबाट भेटेका शीर्षक जति खोजेर अशुल्न किन छाड्थे र ?
कोरानाको बिरामी भनेपछि हरेक इन्भेष्टिगेसनको शुल्क अरुलाई भन्द ५० प्रतिशत बढी शुल्क लिइएको उहाँको भनाइ छ । अरु बिरामीलाई ९ हजार ५ सयमा हुने सिटिस्क्यान कोरोनाका बिरामी भएर आफूहरुले १४ हजार तिर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । बिरामीका छोराका अनुसार बिरामीका सास फेर्न गाह्रो भएपछि अस्पतालले २४ घण्टा अक्सिजन दिई उपचार गरेको थियो।
७ दिनसम्म ७ डोज रेम्डिसिभिर औषधि चलाइएको थियो । गरिएको उपचार हेर्दा त्यति धेरै खर्च नलाग्नु पर्ने बिरामीका छोरा बताउनुहुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अधिकारीहरुका अनुसार एक डोज रेम्डिसिभिरको ७ हजार भन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना बिरामी उपचार गरेबापत्को शुल्कका सम्बन्धमा बनाएको निर्देशिकामा लक्षण नभएका संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेको १ दिनको २००० (खानासहित) सम्म लिन पाउने भनिएको छ।
महामारीमा नर्भिकको धन्दा : बिरामीसँग चर्को अशुली, सरकारसँग राहत
वीरगञ्जका उहाँ त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ । पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढिरहेको छ । आइसीयू, भेन्टिलेटर त परको कुरा सरकारले व्यवस्था गरेको अस्पतालको आइसोलेसनमा पनि संक्रमित बस्न पाउने अवस्था छैन । पैसा र पहुँच नभएका संक्रमितहरुमा जटिल लक्षण देखिएको खण्डमा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने वा निजी अस्पतालहरुमा गएर निरीह बन्दै लुटिनु पर्ने अवस्था देखिएको छ।
मौकामा चौका हान्न दाउ हेरेर बसेका निजी अस्पतालहरुले जीवन मरणको दोसाँधमा परेका बिरामीबाट भेटेका शीर्षक जति खोजेर अशुल्न किन छाड्थे र ? नियमन र कारबाही गर्ने निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई यस्ता घटनाबाट जानकार नभएको होइन । मन्त्रालयले बढी शुल्क लिन पाइँदैन सधैँ भनिरहन्छ तर कारबाही गर्न सकिरहेको छैन। यसअघि पनि नर्भिकले सेवाग्राहीलाई ठगेको पाइएपछि वाणिज्य विभागले कारबाही गर्न खोज्दा त्यहाँका अधिकारीकाे नै सरुवा भएको थियो ।
नर्भिक अस्पतालबाट पीडित भएका संक्रमित बिरामीको बिल हेरौं :